Bilaogera Milaza Fa Hoesorina Ny Minisitry ny Raharaham-Bahiny Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Oktobra 2013 18:39 GMT
Raha miezaka ny hametraka fifanarahana izay kely indrindra momba ny fidirana an-tsehatry ny vahiny ao amin'ny ady ao Syria i Rosia sy i Etazonia, dia ambivitra ny fanantenana manify tsy hidarohan'i Etazonia daroka ara-miaramila, hoy ny tatitr'i el-murid [ru], bilaogera Rosiana manoratra mavitrika momba ny tontolo arabo sy ny ady ao Afovoany Atsinanana.
Tsy maintsy raisina amim-pitandremana fatratra izany rehetra izany, satria tsy fantatra loatra hoe hatraiza moa no azo itokisana ny loharanom-baovaony. Niala tamin'ny fiafenan'anarana [ru] ho Analtoly Nesmiyan, milaza ny tenany ho manampahaizana manokana amin'ny sehatra miaramila manana fifandraisana amin'ny tontolon'ny fitsikilovana izy nefa tahaka ny tsy mba nanao mihitsy izany miaramila izany. Niara-niasa tamin'ny ANNA-News [ru] izy, sampam-baovao an'olo-tokana niorina tamin'ny 2011. Tao anatin'ny herintaona ilay sampam-baovao izay novelomin'ilay Marat Musin no nitati-baovao avy any Syria tamin'ny alalan'ny lahatsary YouTube. Nolazaina moa fa nanana fifandraisana tamin'ny vondron'ny naman'i Syria izy, ary angamba tohanan'ny fitondrana Syriana ara-bola. Tamin'ny 2012 i Nesmiyan novelivelesin'ilay mpanadihady ara-politika Lev Vershinin [ru], izay mibilaogy amin'ny anarana putnik1, ambava. Nampangain'i [ru] Vershinin ho manohana ireo mpanohitra Syriana i Nesmiyan, ho tafiditra amin'ilay fakana an-keriny ilay mpanao gazety Anhar Kochneva [tatitra Global Voices amin'ny teny malagasy], ary ho mpisoloky nandritra ny taompolo 1990.